C/xaaji cali's Comments - Aduun
C/xaaji cali's Comments
← Back to C/xaaji cali's Page
At 4:06pm on February 25, 2011, mohamed a\_qaadir ahmed said… waxaan umada soomaaliyeed ugu yeerayaa banaan bax ay isku xureeyaan umadooda & wadan kooda kacaan oo looga soo horjeesto dulmiga 20 sano nahaysto waa waqtigii kacaanka shacbiga waa inaan kacnaa waa waqtigeena waa waqtigii shacabka oo dalkiisa xuraynlahaa hadhaco qobiil hadhaco shabaab hadhaco xisbul islaam hadhaco ahlu suna haday moodayaan dhiigeena & dalkeena raqiis wallaahi dadbuu agtooda kawayn yahay waa soomaalida axraarta ah waa soomaali wayn koonfur ilaa waqooy bari ilaa gal beed hanoo laato soomaali wayn waa gobee hanoo laato soomaali wayn xageed galaysaan doofaarada wadnkeena baa ba shay maanta waa maalintii malxamada maanta ayaan dalkeena idinka daahiraynaa maanta ayaan taariikhda qoraynaa shacabka wuxuu doonayaa wadankiisa shabka wuxuu doonayaa qaran nimo shacabka wuxuu doonayaa soomaaliya shacabka wuxuu doonayaa nidaam At 3:59pm on October 18, 2010, maxamed cabdalah sujac said… walal barasho wacan oo wanaksan sxb mahad sanid aniga magaceyga waa maxamed macruuf walal At 2:15am on July 23, 2010, maxamed cismaan maxamuud said… kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk At 6:09pm on June 12, 2010, harun macruf said… Xarakada Al-Shabaab ayaa soo bandhigay Cajalad Maqal iyo Muuqaal ah oo laga soo duubay Muwaadin Faransiis ah oo ay Muddo dheer Afduub ku haystaan.
Barta Internet-ka ay leeyihiin Al-Shabaab oo ayaa la soo dhigay Cajaladan oo ka dhex muuqanaya Denix Allex oo ah Muwaadinka Faransiiska ah ee ay Al-Shabaab Afduubka ku haystaan. wuxuuna xirnaa ama uu ku labisnaa dharka ay xirtaan Maxaabiista Al-Qaacidda ee ku jira Xabsiga ay Maraykanku ku leeyihiin Guantanama oo ku yaala Gacanka Cuba. Waxaana sidoo kale ka muuqday Denix Allex Gar wayn oo ku baxay Garku intii uu ku jiray Gacanta Xarakada Al-Shabaab, waxaana Wajigiisa laga dareemayay Daal fara badan.
Denix Allex ayaa akhrinaya Fariin ay u dhiibeen Xarakada Al-Shabaab oo ay ku doonayaan in waxa ay rabaan ay ugu yeeriyaan Dawladda Faransiiska. Waxaana Fariintaasi uu Allex ku akhrinayay Afka Faransiiska , waxaana dowladda faransiiska lagaga dalbaday s inay joojiso taageeradda ay siiso Dawladda KMG ah ee Soomaaliya iyo Ciidamadda Amisom iyo inay badasho areagtideeda ku aadan Sudan iyo Jazaa’ir.
Sidoo kale Al-Shabaab Fariintaasi waxay ku dalbadeen in Faransiisku uu door ka qaato sidii loo sii dayn lahaa Maxaabiista Al-Qaacidda laga haysto.
Hase yeeshee Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Faransiiska ayaa ku tilmaamay Shuruudaha Al-Shabaab kuwa aan la aqbali Karin, wuxuuna ka gaabsay inuu faah faahin dheeri ah ka bixiyo Mawqifka Faransiiska ee ku aadan Muwaadinka ay Al-Shabaab afduubka ku haystaan
harun macruf voa No comments yet!